အရီဇိုးနားပြည်နယ်အာရှအမေရိကန်အသင်းက » အရီဇိုးနား, အာရှ, ပစိဖိတ်ကျွန်းသား, ယဉ်ကျေးမှုကို, စည်းလုံးညီညွတ်ရေး, ပညာရေး, လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး, အလုပ်, ကျန်းမာခြင်း, လူ့န်ဆောင်မှု, လူထုအခြေပြုလူ့အခွင့်အရေး, အဝေးရောက်, လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ
စပွန်ဆာ & Promotion
ယဉ်ကျေးမှုအ Programs ကို
မိုဃ်းကောင်းကင်သို့အဘယျသို့အရောင်ဖြစ်ပါတယ်? (လိုအပ် - spam များကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့)
အရီဇိုးနားပြည်နယ်အာရှအမေရိကန်အသင်းကစည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုတိုးမြှင့်ရကြလိမ့်မည်, ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးစုံမျိုးကွဲများအများပြည်သူအသိပညာကိုရောက်စေ, နှင့်သက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်, ထိုသို့အားဖြင့်ကြီးမားမှာအာရှအမေရိကန်များနှင့်ရပ်ရွာအကြားဆက်ဆံရေးခိုင်မာ. For more information about our organization please click ဒီမှာ
Year of Service: Choo တေ 1995-1996
ter” width=”300″] Year of Service: ဘားနတ်ဝူ – 2001-2003
Carstens မှာ, Pamela Martin-Abella, Marie Cunning, Mei Guraino, Mele Kramer & Shaikh Shams.
© 2017 အရီဇိုးနားပြည်နယ်အာရှအမေရိကန်အသင်းမှ ~ P.O. သေတ္တာ 64864, Phoenix မြို့, THE 85082. တစ်ဦး 501(က c)3 Non-Profit Organization|ProPhoto ဓါတ်ပုံအဓိကအကြောင်းအရာ အားဖြင့် NetRivet